IRejista kunye neCadastre kumxholo wesiTshintsho seSizwe soTshintshiso-i-Geofumadas
NgoJulayi, 2015 cadastre, Okufumaneka, Geospatial - GIS, egeomates My
Nsuku zonke, amazwe agxila kwiindlela zorhulumente-nkqubo, apho iinkqubo zilula khona ukwenzela ukubonelela ngenkonzo engcono kubemi, kunye nokunciphisa amanqanaba okurhwaphilizo okanye i-bureaucracy engadingekile.
Siyazi ukuba umthetho, iziko kunye neenkqubo eziphathelele propati kwilizwe ngalinye zihlukile. Nangona kunjalo, imigaqo ekhonza njengesiseko sezinto ezifanelekileyo ukuthobela imigaqo yokubhalisa efuna injongo efanayo: ukuqinisekisa ukhuseleko lomthetho.
Ulawulo lweZakhiwo zoLwazi lweMhlaba (LADM) imela enye yeempumelelo eziphambili kwiimimiselo zoLawulo loMhlaba; Ukuba sikhumbula ukuba xa iprojekthi yeCadastre ye-2014 iphakanyisiwe, yayingumnqweno kuphela weempawu kodwa imbono kakhulu. Inzuzo ephawulekayo yemilinganiselo yinto enokwenzeka yokufanisa i-semantics yokusingathwa kwezinto, ukuba inkqubo yokuBhaliswa kwePropati ingabandakanywa namanyathelo kwizinga likaRhulumente elifuna ukuhlanganiswa kweendawo ezithengileyo ezijoliswe kumbono womhlaba.
Ndiyazi ukuba kunokuba kubonakale kungabikho komthetho kunye nokunyaniseka, kuxhomekeke kumbono weziko ngalinye kwilizwe. Nangona kunjalo, ukuba ugxininiso kweli nqaku kungenzeka ukuba Registry kunye Cadastre, ngaphandle kokuba siqithi, ukuba unako (data yakho, hayi kwabo), bajoyine izibonelelo data inkqubo yentengiselwano.
Kufuneka kuqondwe ukuba nangona umoya wale nqaku ubuchwephesha, i-LADM ihloniphekile kangangokuthi ivumela ukulungelelanisa umthetho kunye neziko zelizwe ngalinye, ngaphandle kokulibala ukuba ukuhlaziywa kwemali kungekho ngaphezulu.
Inqobo yedatha yedatha
Igrafu ekupheleni kweli nqaku ibonisa ukuba iinqununu eziphambili ze-LADM zingenza i-nucleus apho iinkqubo ezahlukeneyo zisebenzisana, ukudibanisa imiba yeNkqubo yamaLungelo wePropati, ayisebenzisi kuphela kwipropati yangempela, kodwa ihamba nayo. Izinto eziphambili zezenzo zobhaliso zigcinwa kwiziko:
Into ebhalisiweyo, enokuthi ibe yinqanaba, isithuthi, iinqanawa, okanye ngaphandle kwe-georeferencing kwi-cadastre, phantsi kweendlela zobuqu okanye kwifayile yangempela.
Amaqela anomdla; abantu bemvelo, imibutho esemthethweni okanye amaqela angewona asemthethweni. Bonke abo bathatha inxaxheba kwinkqubo yentengiso.
Imirhumo yomthetho kunye nezolawulo; ubudlelwane bokunene, ukuthintela okanye uxanduva oluchaphazela ukusetyenziswa, igunya okanye umsebenzi weempahla.
Ilungelo phakathi kwezinto kunye namaqela anomdla, ebhalisiweyo okanye kwi-facto. Ngokwemgangathweni, kwanomthetho uchongwa njengenye ingqinamba esemthethweni.
Nangona bezonazona zinto zodwa, yizona ezigxila kwizenzo zabadlali abasebenzisana nokuthengiselana: ibhanki, unobhala wesaziso, umcebisi, umcebisi weemephu, abo bangamanye amaqela anomdla kunye neendima ezahlukileyo.
Unokuzibiza njani kunye nendlela yokuzifakela ngayo? ISO: 19152
Ubunokwenzeka bokudibanisa iinkqubo phantsi kweplati eyintloko
Icala kukuba ezi zinto zivela kwiinkqubo ezahlukeneyo zelizwe: Ziyabantu abafanayo ukuba iGosa lokuBhalisa laBasebenzi lijongene neenjongo zonyulo, abantu abafanayo abonakala benza iinkqubo zezimali, iimvume zokuqhuba umsebenzi, iinkqubo zokwakha, ukukhutshwa yeepaspoti, njl
Ngokuqinisekileyo akulula ukuseka imigaqo-nkqubo yoluntu ukuba ilungele le nto. Kanye njengomzekelo, iimbophelelo zokuthandaza ezenza ukuba umbhalisi asebenzise igama njengoko unobhala wencwadi eyayibumba. Ngoko nangona uMaría Albertina Pereira Gómez ephantsi kwabantu, kwaye unobhala wencwadi ubeka uMaría Albertina Pereira de Mendoza, badala omnye umntu, ukuba inkqubo ayinayo inkqubo yokudibanisa okanye yokulawula i-alias.
Ziyimpahla efana neyayiphi iindleko zerhafu eziwa, ezo ziqulethe iimvume, abo bafumana imingcele yokusetyenziswa, njl.
Ngoko kwilizwe elithuthukisa iqonga eliphambili lomcimbi, imeko yeRejistri yomhlaba kunye neCadastre ingomnye umsebenzisi, ngaphakathi kwimiSebenzi yokuBhalisa kunye nokuLungiswa. Amanye amaziko asebenza kwiindima zawo ezifana noLawulo lweMngcipheko, uLawulo loMhlaba, uLungiselelo, uLoqo, uLawulo loPhuhliso lwezeNtlalo, iZibonelelo, njl njl.
Ngaphandle kweso siqithi, iRejistri yoMhlaba iba yinto ebalulekileyo kwi-puzzle yeenkqubo zentengiselwano. Enoba apho uqale inkqubo, ukuba izivumelwano kwi ebhankini, kumasipala okanye iqumrhu elinoxanduva lokukhupha isihloko, ubhaliso + Cadastre ukongeza kwi imeko esifanelekileyo:
Ukuba iziko liceba ukwakhiwa kwebhuloho, iRegistry inikezela ngolwazi oluhambelana noluntu lwendawo okanye yangasese indawo apho iya kuba khona; Oku kuyilwa into-level ifumana njengomqwalaseli kwinkqubo lwezibonelelo, kusetyenziswa ingcaciso evela kwiRejista zokuzoba equlathe imodeli imigodi lwedijithali, iimpawu zejoloji nemeko ukusetyenziswa. Into efanayo ezichongwe kwi-Public Investment System for amalungiselelo mali, kwaye xa wakha njengesikhuseli iimitha 500 echaphazela zebali nangoko ebonisa nemimiselo yokwakha zokungena kumhlaba wabucala kwaye kwakhona kummandla ijelo elisetyenziswa ibhalwe ezantsi kunye nokuvinjelwa kokukhutshwa kweemvume zokukhutshwa kwamacandelo. Ekugqibeleni, xa umsebenzi ogqityiweyo unikezelwa phantsi kwemvume kumasipala ukuba athathe umjikelezo wenkxaso yesigxina.
Kodwa yonke idatha, faka iNkqubo yeRekhodi ekwabelwana ngolwazi oluqhelekileyo. IRejista / iCadastre ibonisa kuphela inkonzo yendawo, kodwa ngokuqinisekileyo ifunyenwe imimiselo echaphazela iipropati ezidibeneyo.
Ngaloo ndlela, ngalinye iqumrhu lidlala indima yalo kwinqanaba layo elilodwa, ukufezekiswa kokusebenza kakuhle kunye nokukhuthazwa kwentlalo yintoni ekugqibeleni oko kubaluleka kumdla jikelele, ukuba sinokuqwalasela ukuba ukuncitshiswa kweendleko kunye namaxesha okuthengisana yinto kuphela exhomekeke kuorhulumente kwiimeko ezahlukeneyo ezinxulumene nophuhliso olunjengeteknoloji nezinye izixhobo.
Ukucacisa ukuba oku akuthethi ukutshintsha iindima, ubuchule kunye nemigaqo elandelwa yiRejista yePropati. Kunoko, ukuba kumgangatho Registry System Emanyeneyo, nto leyo irekhodi Cadastre ngakumbi, nto leyo iya kuqhagamshelwa spatial_unit amanani obhaliso e-Iphepha Real. Njengoko kubhaliswa kunye nemimiselo yokulawulwa kwemimandla, njengoko kubhalisiweyo kunye nerejistri yezithuthi, ukuthunyelwa, njl.
Izakhiwo zobugcisa ezisekelwe kwiNkonzo
Kucacile ukuba ukufikelela kweli nqanaba kufuna imbonakalo ebanzi yeli lizwe, nangona kungabonakali nakumazwe asakhulayo. Yonke imihla ilawulwa ngamaziko karhulumente, abaqeqeshi abaninzi abanokukwazi ukwenza amaqela ahlukeneyo abone ulawulo lukawonkewonke nombono ofanayo kwiinkampani ezinkulu ezivela kuyo. Yiyo imeko yokulungelelanisa okuye kwenzelwa imodeli apho umasipala ubonwa njengendwangu yokumodareyitha apho kukho ukuveliswa, ukugcinwa kwezinto, ukusabalalisa, ukuthengwa kwempahla, ukuthumela, ii-invoyisi kunye nokuphendula; nangona ubukhulu kunye namagunya aqhelekileyo ahlelwa. Yingakho iinkqubo zendabuko zoomasipala be-ERP ziye zaphumelela kakhulu.
Kodwa inkqubo enjengaleyo esiyithethayo, ayikwazi ukucinga ukuba iya kusebenza kunye nophuhliso lwedesktop kunye nezicwangciso ze-client-server. Kunokuba le sicelo lwazi bolwakhiwo lwempahla multilayer ke kufuneka inkonzo yokuziqhelanisa, apho uphuhliso lamanqanaba ntetho bahlukane logic ishishini, kwaye ilawulwe phambili iinjini ngeelwimi ezifana Business Process nokumodela kunye Ubhalo (BPMN 2.0) . Ngaloo ndlela, iinkqubo ezilula ezifana ekudalweni-mboleko, okanye ezintsonkothileyo njengoko individualization kwabantu ezidolophini, nto ibolile zibe amaqumrhu umsebenzi ebomini, iinkonzo eluncedo, yokuba akukho mfuneko ukuphuhlisa inkonzo eyahlukileyo nganye, kodwa kunokuba ukuwahambisa kwizinto zokusebenza eziqhelekileyo.
Izakhiwo zobugcisa ezisekelwe kwiinkonzo zenza ubomi kunye nokugcinwa kweenkqubo ezinkulu, ngeli gama ukugcina abasebenzisi benza kuphela izinto abaziingcali; kungakhathaliseki ukuba uphi na, amagcisa GIS kwenza umsebenzi topological ukuba niya kuxhaxhwa, isakhiwo, ukuzuza amalungelo kwi obhaliso Iphepha Real ukuba abazahluli ukusuka geometry yayo. Ngoko ukubandakanya izicwangciso ezifana ne-Front-Back Office akuzona iinkqubo ezinzima, kuba iNkqubo yinto encinci; oko kubaluleke kuphela ukudibanisa iwindi yokubonisa kwinkonzo apho inkonzo yabathengi yendawo yokucubungula iyahlukana.
Inzuzo yokusebenzisa i-LADM
Elula, ukusuka kwingxelo eyenziwe i-20 iminyaka edlulileyo:
Ixesha elide lokuhlala!
Yingakho enye yeengxaki eziphuthumayo zabashenyi abatsha kunye neengcali kwi-geomatics, kukufunda ukuqonda imodeli. Umgangatho uvumela ukumisa i-semantics kwimiba ekhethekileyo, ukuba kufuneka uxelele umthuthukisi: sebenzisa i-ISO: 19152. Ndiyathanda ukuba kwakungelula, kodwa kulula kakhulu kunokulinda abanye ukuba eze kwaye bathi indlela yePropati ifanele isebenze ngayo, xa iincwadi zethu zengcali kunye neenkcukacha zengcali ziyingcali.
Ngaloo i-coña ...
Inomngeni onomdla wetafile yokuphefumlela endibuyisele kuyo kwaye ndiyabelana ngayo nale ncatshulwa ngenxa yedemokhrasi yolwazi engenakuphikiswa namhlanje. Uyazi ukuba imvakalelo ebangelwa iteknoloji kufuneka ibe nesigxina sobunzima bendima yesikhungo, ngaphandle kokungeke kwenzeke ukuba iyenze inyaniso.
Ekupheleni kosuku, eli nqaku livakala ngathi inzululwazi yobuxoki -namhlanje- Kodwa kumzekelo welizwe endikuthethayo, loo nto yatsho i-11 kwiminyaka edlulileyo xa kwakudingeka ukuba kuqulunqwe uMthetho omtsha wePropati, ngokudalwa kweziko elibandakanya kumgca womyalelo ofanayo kwiCadastre, iRegistry kunye neziko National Geographic. Amaziko ngeenjongo ezahlukeneyo - ewe - kuba bahluke; kodwa ufanele uhambe ukhangele izinto ezilungileyo zommelwane kunye nomsi we-cigar omuhle wokuphefumlelwa ukuze ubone apho izinto zihamba khona. Ngokukodwa kuba asiyazi ukuba siya kuba nini na loo mizuzu emihlanu yithuba lokusebenza.
Iimodeli zamaziko zikhula ngokukhawuleza, uxinzelelo lwethekhnoloji alukwazi ukufana naloo mgangatho. Yingakho imigangatho yenza loo nqanaba lokulinganisela. Kwiminyaka ye-8 ukubuyela emuva kwezobuchwepheshe kunika njalo isizathu, nangona i-lag yeziko zithatha iminyaka engama-30 ukuba ibonakale.
Post edlulileyo«Edlulileyo Uphuhliso kwi-Software Software njengenjini yenguqu
Post Next Ukuthelekisa nokuhlukana phakathi kweQGIS kunye neArcGISOkulandelayo "
Omnye Uphendule "Ukubhaliswa kunye neCastastre kumxholo wesiTshintsho seSizwe soTshintshiso"
Yiyiphi ibakala elihle kakhulu, ndandisele ndikhangela ijeyari yezinto zonke !!! Wowª!